News - Indonesia International mbukota Ngosi
Omume niile nke Hongbang jupụtara na owuwe ihe ubi. Na ngosi ngosi mba ụwa na Indonesia, Hongbang pụrụ ọzọ. Ọ bụ ihe ịga nke ọma zuru oke ma gbaa ajụjụ ọnụ na TV TV mpaghara. N'ime ihe ngosi a, anyị na-egosipụtakwa mmụọ nke Hongbang - ịdị n'otu, nke ziri ezi, ọgụ siri ike. Oge ọ bụla na nkwukọrịta na ndị ahịa nwere ike ịmata ndị ahịa. Njem ọ bụla na-egosi ụdị hongbang.
Nke a bụ ọmarịcha, nsọpụrụ, na-arụsi ọrụ ike.
Nke mbụ, guzosie ike n'echiche gị na nkwenkwe gị. Okwukwe bu ike nke oru nile, obu ntuziaka, bu ihe njiri mara. Naanị mgbe anyị nwere ntụziaka doro anya ka anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma.
Nke abuo, anyi kwesiri ịmụ ihe nke ọma ma melite ogo anyị oge niile. Anyi kwesiri itinye uche anyi na ncheputa sayensi, ghota ihe omume oha mmepe, guzobe echiche ziri ezi nke uwa, ile ihe anya na ndu, na iwulite omume nke imuta akwukwo. Anyị kwesịrị ịkwado echiche ọhụụ oge niile, mụta ihe ọmụma ọhụụ na imata nka ọhụụ, ka anyị wee tinye amamihe na amamihe anyị na mmepe na Hongbang.
Nke ato, dịka onye otu ngwugwu Hongbang, anyị kwesịrị ịga n'ihu ma nwee obi ike iji mepụta ihe. Oge ọ bụla hongbang na-agbanwe agbanwe, ọ ga-agbaso ọrụ ọsụ ụzọ na nke ọrụ ọhụụ, jikọtara ihe ndị isi na njirimara nke Times na nke ọma, wee rụọ ọrụ ahụ. Anyị ga-enwerịrị ike na ume. Dị ka ike ọhụrụ na iwu nke Hongbang, anyị ga-arụrịrị ọrụ na agụụ na -ebi ndụ.
Ndị enyi, ka anyị rụọ ọrụ ọnụ, wụsa ifuru nke ezigbo na ọsụsọ, kpaa aka egwurugwu nke ezigbo na aka abụọ, kpokọta ike nke mmadụ niile, dịrị n'otu dị ka otu, rụsie ọrụ ike, ma dee nnukwu akụkọ n'isi akụkọ ihe mere eme Mmezu nke Hongbang na mmepe!
Post oge: Nov-06-2020